Somaliland: Muddo Dheer kadib Wuxuu cid u ilmeeyo amma la ilmeeyo ammaba Cidla ka Ooyo; waxaa lasoo gaadhay xiliguu Macasalaamayn lahaa Masraxa Siyaasadda. - Wargane News
Home Somali News Somaliland: Muddo Dheer kadib Wuxuu cid u ilmeeyo amma la ilmeeyo ammaba...
Wariayah Cabdirisaaq Terra Oo Magac Xumo Ku Tilmamey Wasiir Caddani Sido Kalana Biyo Qabo Dusha Kaga Shubay Isaga Oo Soo Dhigay Barta U KU Layahay Baraha Bulshada Ee Faceboogisa,,,
Muddo Dheer kadib Wuxuu cid u ilmeeyo amma la ilmeeyo ammaba Cidla ka Ooyo; waxaa lasoo gaadhay xiliguu Macasalaamayn lahaa Masraxa Siyaasadda.
Dad ma dhaqan, Magac kuma kasban, Wax ma qaban; bal lakin raad keliya ayuu ka tagay oo ah mid siyaasada ku Cusub kaasoo ah Meel go’aan iyo ficil wax kaga qabasho u baahan in laga dul ilmeeyo.
Taasoo magaca ka raacay noqday (Hebel Ooyaaye).
Saaka waxay ahayd Madal Saxaafadda iyo Xukuumadu gaar ugu kulmeen Madaxtooyadda.
Wuxuu ahaa kulan aan noociisu ka hor sidan u dhicin marka laga reebo inta aan ka Xasuusto Kulan Alle haw naxariistee Madaxweyne Cigaal beri Samaad xili Ramadan ah fiidnimo Ku dhex maray Wariyeyaashii Wakhtigaa isla Qasrigan maanta.
Kulankan Wariyeyaal badan baa ka hadlay waxaanay si’aan gabasho lahayn Wasiirka Warfaafinta u cadeeyeen sidda uu u yahay Qadar qarankan ku habsaday balse daawo loo heli karo.
Tusaalayaal ayaa loosoo qaatay ay qayb ka ahaayeen Wasaaraddii warfaafinta ee qarankan wasaaraddo badan ulamiisaan ahayd sidda Wasiir Cadaani warfaafintii TV iyo Radio labadaba uga dhigtay meheraddo maqalka magacooda aan Shacabku jeclaysan.
Tusaaleyaasha waxaa qayb ka ahaa Codadkii aragagaxa lahaa ee Wasiir Cadaani kasoo Qaatay WhatsApp group ka Beeshiisa jifada uu ka Yahay ee uu lahaa (Bal dayaay Beeshaydi waxay igu xamanayaan maxaad Kulmiye u raacday iyo reerkaygi Dhagaysta waa idilayaan’e).
Catow, Cabaad, Calaacal iyo Ilmo-hibitiqlayn aaan cidna Aamus lahayn ayaa Madashaasi saaka Cadaani miciin biday.
Madashan waxaa Saaka ka ahaa Cigaal Wasiir Maxamuud Xaashi hadal kii uu Saxaafadda ujeediyey Garnaqsigooda iyo Catowga Cadaani dhagasigiisa kadib; waxaa Wariyeyaashii Madashaasi qireen in Siyaasi bisili oo Cigaal lamood la odhan karaa Qasriga joogo.
Siddoo kale saaka waxay ahayd Subax Qalinka Warbaahintu hoosta kaga duugtay Macasalaamaynta Cadaani ee Masraxa Siyaasadda.
Ugu dambayn Cadaani Mooyaane iyaddoo cid waliba libin lalansanayso ayaa lagu soo kala dareeray.